Kolikoly 2017 | 102 KARA
Io indray izao no teny teo am-bavan’ny maro tato ho ato.
Efa noresahina foana izy ity nandritry ny fotoana maharitra, saingy toy ny teny nentin-drivotra fotsiny.
Izao farany izao kosa dia tsy afaka am-bavan’ny maro intsony miampy ny fehezan-teny hoe : « AVO LENTA » Tsy nisy izay tsy niresaka ny raharaha Claudine RAZAIMAMONJY mantsy tamin’ity herinandro ity na ny mpanao gazety ( an-tsary, an-tsoratra, am-bava ) na ny olon-tsotra isan-tsokajiny. Nijoro amin’ny maha-izy azy tokoa mantsy ny BIANCO na ny sampan-draharaha miady amin’ny kolikoly, ka nisambotra sy nanao famoitorana an-dramatoa Claudine Razaimamonjy. Rehefa nentina teo amin’ny ambaratonga isan-tokony dia niafara taminn’ny fitànana am-ponja -Antanimora azy ity mpandraharaha mpanefoefo voarohirohy tamin’ny KOLIKOLY AVO LENTA ity.
Tsy niditra an-tranomazina anefa izy fa nampidirina hopitaly tao aminy HJRA.
Dia sady niomehy no nanadroadro ny nilaza ny « tsss… » ny maro ary nitakoritsika ny hoe : io ilay resaka tsy maty manota eto Madagasikara ka ny lalàna sy ny famaizana ary ny fampidirana am-ponja dia natao ho an’ny madinika ( mpangalatra akoho ) fa tsy natao ho an’ny MPANOTA MATEVIN-KODITRA izay tsy ho laitran’ny balan’ny famaizan’izay fitsarana .
Tsy ramatoa Claudine Razaimamonjy ihany no tena vifanga amin’ity kolikoly avo lenta ity fa mbola betsaka sy maro hafa . Mahavelom-panantenana aloha ny fahasahian’ny BIANCO tsy nitolefika amin’izay mety ho tsindry isan-karazany. Ny antenaina sy ANDRASANA izao dia ny hampiharihary toy ny kary an’efitra ireo maro hafa nilomano tao anatin’ity resaka kolikoly avo lenta ity ka nampitondra fahoriana sy ny fahantrana ary ny ranomasom-bahoaka.
Na izany na tsy izany dia andrasantsika foana ny TOHINY satria Andriamanitra tsy andrin’ny hafa andriko ihany hoy ny fahendrena malagasy tsy sasatry ny mandefitra…
8 avril 2017 - 14 h 21 min Politique 711 vues